Freshworks: Noocyo Kaladuwanaansho Isugeyn Isbadal Badan oo Hal Suite ah | Martech Zone
Casrigan casriga ah, dagaalka loogu jiro booska suuq geynta ayaa u wareegay internetka. Iyada oo dad badan oo khadka tooska ah ku jira, diiwaangelinta iyo iibkuba ay ka guureen meelihii ay ka soo guureen oo ay u wareegeen kuwii cusbaa, ee dhijitaalka ahaa Websaydhadu waa inay ahaadaan ciyaartooda ugu fiican oo ay tixgeliyaan naqshadaha goobta iyo khibrada isticmaalaha. Sidaa darteed, degellada internetku waxay muhiim u noqdeen dakhliyada shirkadda soo gala.
Marka la eego xaaladdan, way fududahay in la arko sida heerka sare u-rogidda, ama CRO sida la ogyahay, waxay u noqotay hub muhiim u ah arsenal suuq geyn kasta oo farsamo yaqaan ah. CRO waxay sameyn kartaa ama jebin kartaa joogitaanka suuqgeynta shirkadeed ee shirkadda iyo istiraatiijiyad.
Qalab badan oo CRO ah ayaa laga heli karaa suuqa. Dhibaatadu, si kastaba ha noqotee, waa in CRO wali waxtar lahayn. Evolution-ka tikniyoolajiyadda laguma shaacin sida aan u fulinayno isku beddelka heerka beddelka.
Kordhinta heerka beddelashada waa shaqo adag. Waa tan xaalad caadi ah:
Suuqgelaha marka hore waa inuu ku soo rogaa bogga qalabka. Isagu wuu qaxweeyaa oo hubiyaa waraaqihiisa sida boggu u raran yahay. Kadib, wuxuu bilaabayaa inuu isbedel ku sameeyo bogga. Ka dibna wuxuu u baahan yahay inuu qaato caawimaadda kooxdiisa tiknoolajiyadda si uu isbeddel ugu sameeyo degelkiisa. Kadibna, wuxuu sameeyaa tijaabooyin si loo hubiyo in dhammaan waxyaabaha ku jira bogga loo dhigo inay ka faa'iideystaan. Haddii kale, markale ayuu bilaabayaa, isla markii uu bogga soo raro, oo uu qaxwo kale yeesho. Si aan u dhigno si qumman, wuxuu wali ku xayiran yahay nidaamkii la raacay markii la soo bandhigay bogga internetka - Waana sidaas oo kale inteena kale. Ma jirin hal-abuurnimo muhiim ah CRO, si macquul ah ugu filan.
Si kastaba ha noqotee, Freshworks waxay leedahay jawaab. Freshmarketer (hore Zarget) waxaa loo aasaasay 2015 si hal-abuurnimo loogu keeno warshad aan arag wax hal abuur horumarineed oo muhiim ah sanado iyo in la jebiyo ku tiirsanaanta suuqleyda ee soo saarayaasha si loo wanaajiyo loona maamulo tijaabooyin horay u jiray.
Shirkadaha raadinaya inay horumariyaan heerka beddelaadda boggooda had iyo jeer waxay ku tiirsanayeen qaab fowdo ah oo qaybo kala duwan ah si ay u gaaraan himilooyinkooda, oo ay u iibsadaan badeecooyin badan oo softiweer ah hal olole - Waxyaabaha Freshmarketer waxay raadinayaan inay wax ka qabtaan iyagoo soo bandhigaya qaybo kala duwan oo wax ku ool ah hal shey oo keliya softiweer. , taas oo meesha ka saaraysa baahida loo qabo in la sii eego wax kasta si loo dhammaystiro hawsha.
Si kale haddii loo dhigo, isuduwaha dhammaadka illaa dhammaadka ayaa hadda suurtagal ah, iyadoo la adeegsanayo hal shey oo softiweer ah - oo loo yaqaan Suugaanta CRO. Kooxda Freshmarketer waxay jecel yihiin inay ka fekeraan beddelaad ahaan geedi socod meerto halkii mid toosan, halkaas oo xogta laga helo websaydhku ay bixiso aragtiyo, oo aad u isticmaashid inaad ku dhisto fikrado, oo aad u isticmaasho aasaaska u fiicnaanta, taas oo iyaduna bixisa xog dheeri ah - Iyo wareegyo xiga wareegga raac.
Xalka gaarka ah ee Freshmarketer wuxuu kujiraa kumbuyuutarkiisa koombiyuutarka, iyo iskuxirkiisa oo dhan-in-mid ah. Qalabkeeda ugu horreeya ee kumbuyuutarka ee loo yaqaan 'Chrome-ka' ayaa ka dhigtay mid aad u fudud in la tijaabiyo lana xoojiyo boggaga wax lagu iibsado, kuwaas oo markii hore aan xadidnayn. Qalabyada ugu fiicnaanta dhaqameed ayaa ku koobnaa inay u baahan yihiin isticmaaleyaasha inay ku dhejiyaan boggooda bog kale. Tani waxay keentay khataro xagga amniga ah waxayna sidoo kale macnaheedu tahay in qalabkani uu lahaa xaddidaadyo waaweyn oo ah waxa ay sameyn karaan. Si kastaba ha noqotee, kooxda 'Freshmarketer' ayaa ka gudubtay dhammaan xaddidan. Nidaamkeeda beddelaadda dhammaan-hal-ka-mid ah waxaa ka mid ah Heatmaps, Tijaabinta A / B, iyo Falanqaynta Masraxa oo wadajir ah.
Waa kuwan waxyaabo fiican oo aad ku sameyn karto Freshmarketer:
Tayaynta iyo tijaabinta bogagga midig ka biraawsarkaaga, la Freshmarketer-ka Chrome.
Eeg warbixinnada xogta tooska ah - Fahanka sida iyo goorta isdhexgalka uu dhacayo. Muuqaalad-qaadasho dambe
Isticmaal awood badan Qaybaha CRO leh hal shey oo keliya.
Raadi qasabno on walxaha websaydhka is-dhexgalka.
Habee URL-yada fudeyd, caawimaad aad u yarna ka hesho kooxdaada teknolojiyada.
Hel xalal isku dhafan markaad socodsiinayso qaybo shaqsiyeed. Oo ay ku jiraan baaritaanka A / B oo leh khariidado kuleyl leh.
Nidaamka wareegga ku habboon ee lagu taliyey Freshmarketer wuxuu ku bilaabmaa falanqaynta mareenka. Falanqaynta Funnel waa halka boggag dhowr ah oo u adeega dariiqa beddelashada lagu tijaabiyo si loo arko halka booqdayaashu ka soo dhacaan masjidka. Tani waxay kaa caawinaysaa inaad ogaato sida booqdayaashu ula falgalaan macnaha guud ee beddelaadda.
Marka xigta, waxaad u gudbeysaa adeegsiga khariidadaha kuleylka, kuwaas oo lagu dhex daray falanqaynta masaska. Heatmaps-ku waa matalaad garaaf ah oo xog uruurinta bogga guji ah. Waxay ku tusayaan waxyaabaha websaydhka ka shaqeeya ee sida liita wax u qabta, iyo qaybaha boggaaga u baahan in la saxo. Ka dib barashada halkaas oo way dhacaan, waad baranaysaa sababta way iska dhacaan.
Markaad aqoonsatid waxyaabahaaga daciifka ah iyo bogagga, markaa waxaad u gudbi kartaa tallaabada ugu dambeysa - baaritaanka A / B. Si kastaba ha noqotee, kahor intaadan bilaabin baaritaanka A / B, waxaa fiican inaad sameyso mala awaal adag oo tijaabo ah. Hypotheses ee tijaabooyinka A / B waa inay ku saleysnaadaan fikradaha ka soo baxa tijaabooyinkaagii hore. Imtixaanka A / B waa halka isbeddel lagu sameeyo bogga, loona keydiyo sidii nooc ahaan. Gaadiidka booqdayaashu wuxuu u qaybsan yahay noocyadan kala duwan, iyo midka roon ee 'badinta'.
Oo markii aad ka tagto nooca ugu fiican ee boggaaga, waxaad bilaabaysaa wareegga mar labaad!
Waxaan u adeegsanay Freshmarketer boggayaga isdiiwaangelinta, annaga oo ku samaynayna wax ka beddelid iyada oo ku saleysan mala awaal lagu sameeyay xogta la soo ururiyay iyadoo la adeegsanayo Freshmarketer, taasoo kor u qaadday saxiixyada 26% saddex maalmood gudahood. Shihab Muhammed, BU Madaxa Freshdesk.
Sida laga soo xigtay daraasadaha iyo indha indheynta khubarada warshadaha, hagaajinta sicirka beddelka ayaa u diyaar ah inay aragto koror weyn sanadaha soo socda iyadoo suuqyo badan oo ka mid ah ay sii kordhayaan muhiimadda ay siinayaan CRO ololahooda. Marka la eego kala duwanaanshaheeda, fududaanta adeegsiga, iyo astaamaha u gaarka ah, Freshmarketer si fiican ayaa loogu meeleeyay si looga faa'iideysto horumarka ka socda berrinka.
Freshmarketer waxay u taagan tahay boodbood horumarineed marka loo eego sida shirkaduhu u wanaajin karaan beddelaadyada una arkaan qoto dheer waxqabadka goobta. Tixgeli horumarka gaabiska ah ee ka socda warshadeena marka la barbar dhigo warshadaha muusikada, oo si dhakhso leh uga gudbay rikoodhada una gudbey CD-yada, iPod-yada, iyo ugu dambeyn, qulqulka. Qalabka kumbuyuutarka ee Chrome waa tallaabada xigta ee CRO waxayna u taagan tahay mustaqbalka hagaajinta heerka beddelashada, iyada oo ay ugu wacan tahay dadaalkeenna aan ku dooneyno inay noqdaan kuwo aan fiicnayn oo wax ku ool ah iyada oo la isku darayo qaybo kala duwan oo beddelaad ah Waxaan rajeyneynaa in si dhakhso ah loo korsado maadaama baahida iyo miisaaniyadda loogu talagalay hagaajinta heerka beddelaadku ay kororto adduunka. E-commerce iyo SaaS shirkadaha isla markiiba waxay ogaan doonaan faa'iidooyinka ay leeyihiin hal qol oo loogu talagalay kuleylka-waqtiga dhabta ah oo ay weheliso A / B iyo baaritaanka funnel.
Isku day Freshmarketer si bilaash ah
Tags: imtixaanka abplugin chromeHagaajinta beddelkaheerka sare u-rogiddafadhiSuite crosuuq cusubshaqooyinka cusubfalanqaynta funnelchrome googlegoogle chrome pluginkhariidaynta kuleylkakhariidadaha kuleylkakhariidayntakhariidadahatabinta xogta tooska ahwarbixinnada tooska ahHagaajintakala-qaadista imtixaanka URLriix qasabnozarget
Arvind waa agaasimaha guud & aasaasaha Zarget, halkaas oo marka lagu daro fikirka fikradda shirkadda iyo tijaabinta habka waxqabadka si loo gaaro ujeedooyinkooda, wuxuu hadda madax ka yahay suuqgeynta wax soo saarka, presales iyo howlaha iibka. Shaqaalihii hore ee Zoho halkaas oo uu madax ugu ahaa suuqgeynta wax soo saarka ee ITSM suite ee alaabada calanka, Arvind wuxuu aragtiyo qiimo leh ku kasbaday warshadaha SaaS iyo dhammaan 'Suuqgeynta'. Arvind wuxuu ka soo qaatay qibradiisa qibrada badan inuu awood u yeesho qeybaha ganacsiga horay u socodka. Wuxuu sidoo kale taageere u yahay Chelsea.
Isku hagaaji: Cabbiraadda Suuqgeynta Suuqa ee Moobilka iyo Ka Hortagga Khayaanada